အမှား 0x000000f4 ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > 0x000000f4 0x0000000000000003 - စာရင်းမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုရပ်ပါ
0x000000f4 0x0000000000000003 - စာရင်းမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုရပ်ပါ
အမှား 0x000000f4 ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။
အဆင့် ၁:Troubleshootအပြာရောင်မျက်နှာပြင်အမှား။ ...
အဆင့် ၂: Hard Drive ကိုစစ်ဆေးပါ။ ...
အဆင့် ၃: ဒေတာများကိုအရန်ကူးပါ။ ...
အဆင့် ၄: CHKDSK စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။ ...
အဆင့် ၅ - လတ်တလောထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားပါ။ ...
အဆင့် ၆: Device Drivers အားလုံးကို Update လုပ်ပါ။
အမှားကုဒ် 0x000000f4ကွန်ပျူတာဖြစ်စဉ်တစ်ခု၊ ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အရေးပါသောပရိုဂရမ်တစ်ခုသည်မမျှော်လင့်ဘဲအဆုံးသတ်သွားပြီးကွန်ပျူတာ၏လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သည့်အခါဖြစ်ပေါ်သည်လုပ်နိုင်Microsoft Windows OS တွင်အသုံးမပြုတော့ပါ။0x000000f4 အမှားကုဒ်သည်Windows Blue Death of Death (BSOD) ဟုလည်းလူသိများသည်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၁၂ နှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာအသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်ပရိုဂရမ်များအတွက်အင်တာနက်ရှာဖွေခြင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး Windows XP ပါတဲ့ ၂၀၀၅ လက်ပ်တော့ပ်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ကွန်ပြူတာစတိုးမှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့ Windows Vista နဲ့တူအောင်လုပ်ချင်ခဲ့တာ။
CrystalXP.net လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်။ CrystalXP တွင် BricoPacks ဟုခေါ်သောပရိုဂရမ်နှစ်မျိုးရှိသည်။ ၎င်းကိုရိုးရှင်းသော installer ကို အသုံးပြု၍ အသစ်များသောအကြောင်းအရာများ၊ နောက်ခံပုံများနှင့်အခြားအရာများထည့်သွင်းနိုင်သည်။
XP ကို ​​Vista ကဲ့သို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာကို 'Vista Inspirat' ဟုခေါ်သည်။ ဒါမှမဟုတ် 'Vista Inspirate' ကိုအသံထွက်တယ်၊ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ငါမသိဘူး။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ယခုနှစ် 2017 ခုနှစ်တွင်ယခုနှစ်တွင်ငါ CrystalXP ထပ်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ထို site သည်မကြာသေးမီကမှပြုတ်ကျသွားခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သမျှသည် style.org မသိမ်းထားသော archive.org မှ screenshots များကိုသင့်အားပြရန်ဖြစ်သည်။
ငါရှိသည် သတိပေးချက်များကိုလွန်ခဲ့သော ၉ နှစ်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းသတိပြုပါ။ 64-bit ဗားရှင်းများတွင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုမှန်းတောင်မသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကပြproblemနာမရှိဘူးဆိုတာကိုထည့်သွင်းခဲ့တယ်။ 64-bit Windows XP မရှိတဲ့အတွက်အဲဒါကိုကျွန်တော်သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ ပြုပြင်ထားသော Windows ဗားရှင်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ပါ။
၎င်းသည် 'Gold' ကိုဖော်ပြသော်လည်းယနေ့ခေတ်တွင်လူသိများသည့်အတိုင်း 'Gold XP 2016 by Computer Worm' ဟုမဆိုလိုပါ။ အထူးသဖြင့် LSD ဟုလည်းဖော်ပြထားသည်။ ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့် Windows XP ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအတွက်ထူးဆန်းတဲ့နာမည်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါစစ်ဆေးခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ပြင်သစ်ပြုပြင်ထားသော Windows XP ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
ဒီဖိုရမ်ကို ၂၀၀၅ နို ၀ င်ဘာနေ့စွဲတွင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်အသွင်အပြင်များနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြပြီး၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက်လားဆိုသည်ကိုအပြောအဆိုဖြင့်ဖော်ပြထားသည့်သြဂုတ်လ ၂၀၀၆ ရက်စွဲပါဆောင်းပါး။ ဤဗားရှင်းသည်အထူးသဖြင့်နိမ့်ကျသောစနစ်များအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်ဟုထင်ရသည်။ ၎င်းကို download ပြုလုပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာသည်၊ သို့သော်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒီဟာကဗားရှင်း ၃.၇ ဖြစ်ပြီး၊ သူတို့လုပ်တဲ့နောက်ဆုံးဟာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ၎င်းတွင် Hyper-Threading ပါသည့် Pentium4ပရိုဆက်ဆာများနှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်လုံးဝနိမ့်ကျသောစစ်မှန်သည့် dual-core ပရိုဆက်ဆာများအတွက်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုကိုဖော်ပြထားသည်။
၎င်းသည်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းအခြား XP mods များတွင်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းတွင် LSD ကဲ့သို့သောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများမရှိသော်လည်း၎င်းသည်ပါးပျဉ်းအောက်တွင်ပြုလုပ်သည်ဟုသင်ထင်ပါလိမ့်မည်။ Setup ၏ပထမအပိုင်းသည်များသောအားဖြင့် Windows XP ၏မည်သည့်ပြင်သစ်ဗားရှင်းနှင့်မတူသည်။
ထိုအခါမူကားငါတို့ရ။ ဤတိုးတက်မှုများအားလုံးကိုဖော်ပြသည်။ ထိုစဉ်က SSD များသည်ပိုမိုရှေးကျသောလူကြိုက်များမှုမရှိသောကြောင့်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာနောင်တွင်သင်မြင်ရမည့်အတိုင်းစိတ်ကူးမကောင်းသောဝင်းဒိုး၏ပြင်ဆင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ရုတ်တရက်ဤ command prompt ၀ င်းဒိုးသည်သတိပေးလာလိမ့်မည်။ သငျသညျကပိတ်မထားဘူးနှင့်သင်က Hyper-Threading နှင့်အတူတစ် ဦး က Pentium4ရှိမရှိမေးတယ်။ dual-core ပရိုဆက်ဆာရှိသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်မှာ Core i7 ရှိလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ Hyper-Threading ဖြစ်ပေမဲ့အဲဒါကို virtualized လို့မထင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် OS ကအဲဒီနောက် boot တက်ဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ ။ နောက်ခံနောက်ခံပုံများနှင့်ဖောင့်များကိုအလိုရှိသလားဟုသင့်အားမေးလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုအခါဤထူးဆန်းတဲ့ပြတင်းပေါက်ပေါ်လာနှင့်ငါအသုံးပြုသူအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်ငါ့ကိုမေးတယ်။
ပြီးတော့ Windows XP LSD မှာ CrystalXP BricoPacks ကို install မလုပ်ဖို့သတိပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ Windows XP LSD ပါ ၀ င်နေလို့ပါ။ ၎င်းသည် ၀ င်းဒင်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် WinLSD မှထည့်သွင်းထားသော Vista Inspirat ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် start button မှလွဲ၍ Brico pack နှင့်တူညီသည်။ Crystal Clear Brico pack ကိုသင်ကြိုက်ခဲ့လျှင်သင်ကံမကောင်းတော့ပါ။ သင်၏လုံခြုံရေးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံမှုများထည့်သွင်းထားကြောင်း setup ကဖော်ပြခဲ့သည်။
အဲဒါကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနာဂတ်မွမ်းမံမှုများကော။ ကောင်းပြီ၊ အလိုအလျောက် update များကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ပြီး Windows Security Center ကိုလည်းပိတ်ထားသည်။ ရဲ! မင်းဒီမှာအဆင်ပြေလား ကျွန်ုပ်ပိတ်ထားသည် - ကျွန်ုပ်သည်လုံခြုံစိတ်ချရမှုအမြင့်ဆုံးမဟုတ်သကဲ့သို့! အနည်းဆုံးသင်အလွယ်တကူပြန်ဖွင့်နိုင်သည်။ Start menu တွင် WinLSD အပိုင်းပါ ၀ င်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းမှာအင်္ဂလိပ်လိုထူးဆန်းနေဟန်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ပြင်သစ်လိုပြောရရင်တော့ပုံမှန်ပါပဲ၊ All Programs menu ကို 'The Programs' လို့ခေါ်တယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤအပိုင်း၌ Windows Security Center ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုပြန်လည် enable လုပ်ရန်အတွက် registry အပြောင်းအလဲများစွာပါ ၀ င်သည်။ ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းလာပြီ
တရားမ ၀ င် Windows XP Service Pack4ကို install လုပ်ရန်၊ Service Pack3ကို install လုပ်ရန်၊ ထပ်မံ update အသစ်များတပ်ဆင်ရန်နှင့် POS Ready patch အားupdatesပြီလ ၂၀၁၉ မှတစ်ဆင့်လုံခြုံရေး update များကိုလက်ခံရန်ခွင့်ပြုလိုပါသည်။ သို့သော်ဤသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တွင် kernel ပြုပြင်ထားပါသည်။ Pentium4Hyper-Threading အတွက်ဒီအထူးပြုတဲ့ kernel လို့ထင်ရပါတယ်။ ဖန်သားပြင်အဖုံးကတောင် '' ဒါဟာအဆင်ပြေသွားပြီ '' ဟုပြောလိမ့်မည် ဒါကြောင့် Windows Update ကိုတဖြည်းဖြည်း update လုပ်ရုံပဲပေါ့။
Update အချို့ကိုထည့်သွင်းထားသော်လည်း Service Pack3အပါအ ၀ င်အများစုမှာရှင်းပြချက်မရှိဘဲပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဤ third-party kernel သည် update တိုင်းနီးပါးကိုချိုးဖျက်ခဲ့သည်။ ထိုအရာအားလုံးကို5စက္ကန့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာစတင်? ဒါကကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလို့မထင်ဘူး
သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီ operating system ကိုပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပါဝါသုံးစွဲသူများအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာဖြစ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်မှအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ unpatched system တစ်ခုကသင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ဖိုင်များကိုအန္တရာယ်ပြုနေပါတယ်။ ပြုပြင်ထားသော operating systems များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက Linux ဖြန့်ဝေမှုကို install လုပ်ပါ။ ဒီလိုမျိုးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုမကြာခဏရလေ့ရှိတဲ့အတွက် Windows နဲ့မဆက်သွယ်ပါနဲ့။
image8.pubmatic.com မှ imgsync
ဒီ operating system မှာ LSD ကိုနေရာတိုင်းနီးပါးမှာထားပုံကမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထိခိုက်မှုမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာသင့်ကွန်ပျူတာကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကြီးမားသော 'LSD' စာလုံးနှင့်ပြွတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူတက်စေလိုပါသလား။ ဒီ Virtual Machine ကိုဖျက်ဆီးခြင်းအားဖြင့်ဒီဆောင်းပါးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရအောင်။ LSD ကို install လုပ်တဲ့ Windows XP ရှိ Brico package ထဲကိုဝင်ကြည့်ရအောင်။ ဒီ kernel tweaks များရှိသည့် Windows XP ၏ English version များလည်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုမတွေ့ရပါ၊ ၎င်းတို့သည် 'WinLSD' ထက် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနာမည်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။
ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုပါ။ Windows ၏စျေးကွက်မူကွဲများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သူတို့သည်မွမ်းမံမှုများကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။ သင်ပြုပြင်ထားသော operating system ကိုလိုချင်လျှင် Linux ဖြန့်ချိခြင်းကိုသာအစားထိုးသင့်သည်။ WinLSD ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာငါ့ကိုအသစ်တစ်ခုကိုအသစ်သင်ပေးတယ်။ သင့်တွင်အကြံဥာဏ်များ၊ အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်ပေးပါ။
အဘယ်အရာက '0x000000f4' ကိုရပ်တန့်စေသည့်အမှားဖြစ်စေသနည်း။
၁ ဤ Stop error message ရှိ parameters များသည်ကွန်ပျူတာ၏ဖွဲ့စည်းမှုပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သို့သော်ပထမ parameter သည်အမြဲတမ်း 0x00000003 ဖြစ်သည်။ ၂ '0x000000F4' Stop အမှားများအားလုံးသည်ဤပြissueနာကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ၃ Hitachi ၏ JP1 software package ကိုဆာဗာတွင်တပ်ဆင်ထားပါကပြTheနာဖြစ်နိုင်သည်။
သေမင်း၏အပြာဖန်သားပြင် 0x000000f4 သည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။
0x000000F4 သို့မဟုတ် 0xF4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION သည်အပြာရောင် Windows of Death (BSOD) သို့မဟုတ် STOP အမှားကုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသော Windows လုပ်ငန်းစဉ်သို့မဟုတ်ချည်မှမမျှော်လင့်ဘဲရပ်တန့်သွားသောအခါပေါ်လာသည်။ STOP: 0x000000F4 (0x0000000000000003, Parameter2, Parameter3, Parameter4) STOP အမှားသည်အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ပေါ်လာနိုင်သည်။
Excel မှာ 0x0 ကုတ်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
အမှားကုဒ် = 0x0 ရလဒ် - အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။ အမှားကုဒ် = 0x0 ရလဒ် - အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။ အမှားကုဒ် = 0x0 ရလဒ် - အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။ အမှားကုဒ် = 0x0 ရလဒ် - အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။ အမှားကုဒ် = 0x0 ရလဒ် - အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။ အမှားကုဒ် = 0x0 ရလဒ် - အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။ အမှားကုဒ် = 0x0 ရလဒ် - အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။